Ama-sdet unicorn - kungani kunzima kangaka ukuqasha ama-sdets?
none Ezishintshayo Ama-Unicorn e-SDET - Kungani Kunzima Kangaka Ukuqasha ama-SDET?
I-SDET, eyaziwa nangokuthi yi-Software Development Engineer ku-Test, iyindima yomsebenzi ngaphakathi kwe-Software Testing ne-Quality Assurance Domain. Leli gama ekuqaleni lalisetshenziswa yiMicrosoft bese kuba yiGoogle ngenhloso yokufaka i-automation esikhundleni somsebenzi wokuhlola owenziwe ngesandla nowokuphindaphinda.
Eminyakeni edlule, izinkampani eziningi ngokwengeziwe ziqasha ama-SDET njengoba kuyindima ebaluleke kakhulu ku-Agile naku-DevOps. Kodwa-ke, kuyindima eyinselele ukugcwalisa.
Ubuchwepheshe buguquka ngokushesha okukhulu futhi abahloli badinga ukufunda okuningi ukuze bahlale ngaphambi komdlalo.
Kokuthunyelwe kwami ​​kwangaphambilini, Ukuhlolwa Emhlabeni We-DevOps , Ngichaze ukuthi indima yomhloli ishintshe kanjani kule minyaka eyishumi edlule, yingakho kudaleke ukuntuleka kwe- hlola ama-unicorn .
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngendima ye-SDET nokuthi kungani kunzima ukuthola ama-SDET ama-unicorn.
Yini eyenziwa yi-SDET?
I-SDET ingumhloli wesoftware yezobuchwepheshe egxile ekwenzeni imibhalo yokuhlola ezenzakalelayo.
Imvamisa, bayingxenye yethimu ye-agile futhi basebenzisana nabathuthukisi ukusiza ukwenza i-Acceptance Criteria ezindabeni zomsebenzisi.
Kanye nokubamba iqhaza emisebenzini ejwayelekile ye-QA, bangabhala noma yini kusuka ekuhlolweni okuzenzakalelayo kokuhlanganiswa, ukuhlolwa kwe-API kanye / noma ukuhlolwa kwe-UI automation.
Ngaphezu kwalokho, ama-SDET angasiza ukubuyekeza izivivinyo zamayunithi ezibhalwe ngonjiniyela.
Kungani Kudingeka ama-SDET?
Kuwo wonke umkhiqizo, kunezici ezithile eziyinhloko okumele zisebenze kukho konke ukukhishwa komkhiqizo. Lokhu kusho ukuthi kuyo yonke i-sprint, izici ezintsha kanye nokusebenza okukhona kufanele kuhlolwe.
Ukuthuthukiswa kwe-Agile kuyashesha. Ngama-sprints amafushane, ajwayele ukuba ngamaviki ama-2 ubude, abahloli abanaso isikhathi sokuhlola yonke into ngesandla.
Lapho abahloli eqenjini bengenawo amakhono adingekayo okubhala amasheke azenzakalelayo, konke ukuhlolwa kufanele kwenziwe ngesandla.
Ekugcineni, ukuhlolwa kuba yibhodlela ekwakhiweni nasekukhishweni kwesoftware ngoba kuzothatha isikhathi eside futhi ngaphezulu ukuqeda.
Ngakho-ke, ukuqasha nokubeka ama-SDET eqenjini le-agile kunganciphisa imithwalo ngokwenza ngokuzenzakalela izivivinyo zemisebenzi nemisebenzi.
Ukuxoxisana nokuqasha ama-SDET
Ngakho-ke, kungani kunzima ukuthola nokuqasha ama-SDET amahle?
Eminyakeni edlule, iningi lama-SDET okuthiwa ngiwaxoxile kungenzeka ukuthi alinawo amakhono obuchwepheshe adingekayo noma awanakuyiqonda i-QA kanye nemigomo yokuhlola.
Abasiqondi ngokugcwele isizathu esiyinhloko sendima ye-SDET eqenjini. Iningi lihlangabezana nomcabango wokuthi konke okudingeka ukuthi bakwenze ukuzenzela inqubo yokwamukela. Masibe sobala, i-SDET AKUYONA unjiniyela we-automation .
Ukuba nokulinganisela okulungile kokuhlola ukufaneleka namakhono ezobuchwepheshe kuyinto esemqoka.
I-SDET enhle ingumhloli wesoftware ngokuhweba, inothando ngekhwalithi yesoftware futhi ngasikhathi sinye i-tech-savvy futhi inenhlanganisela efanele yamakhono obuchwepheshe.
Lapho ngixoxisana nama-SDET, ngihlala ngifuna I-QA Mindset futhi Amakhono Ezobuchwepheshe.
Iphrofayili ye-SDET - Abahloli Bendawo Ephelele
Ngabe ibukeka kanjani iphrofayili ye-SDET enhle? Imaphi amakhono okufanele abe nawo ama-SDET?
Manje, abanye bethu bezwile ngabathuthukisi abagcwele isitaki, kepha singaba nabo abahloli besitaki esigcwele ?
Ngokubona kwami, i-SDET kufanele ibe nayo okungenani amakhono nezimfanelo ezilandelayo:
Inomqondo wokuhlola, inelukuluku futhi ingaqhamuka nezimo zokuhlola ezithakazelisayo
Unokuqonda okuqinile kwemigomo nezindlela zokuhlola
Uyazi ukuthi konke ukuhlolwa kuyahlola ngokwemvelo futhi uyawazisa umehluko phakathi ukuhlola nokuhlola.
Ingafaka izindlela ezifanele zokuhlola ngesimo esinikeziwe
Wazi umehluko phakathi kokuhlolwa ne-QA
Uyaqonda I-HTTP nokuthi zakhiwa kanjani izinhlelo zanamuhla zewebhu
Ingabhala i-UI kanye ne Ukuhlolwa okuzenzakalelayo kwe-API. Enye noma enye ayanele ngokwanele!
Uyazi I-Git, Izicelo Zokudonsa, Igatsha , njll.
Ingabe i-agile ngokwemvelo futhi iyazi ukuthi ukuhlolwa kungena kanjani kumodeli ye-agile
Ingabhala imibhalo yokuhlola ukusebenza ( Ukugoqa kanye / noma JMeter )
Ucabanga ngezokuphepha futhi uyazi I-OWASP
Iqonda i-CI / CD nokwakha amapayipi
Iyazi izinsizakalo ezinikezwa abahlinzeki besikhulumi samafu njenge-AWS, i-Azure ne-Google Cloud
Ukuba yi-SDET enhle
Njengoba kungabonakala, uhla lwamakhono alindelwe kwi-SDET lubanzi impela.
Iseluleko sami kubahloli abafuna ukuba ngama-SDET futhi bahlale befanelekile esikhathini esisha se-QA sithi:
Qiniseka ukuthi usebenzela ukuba nawo wonke lawa makhono angenhla kuphrofayili ye-SDET, kepha ubuncane: _
Yazi futhi uqonde izisekelo zokuhlolwa
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, yazi izisekelo zokuhlolwa kwesoftware.
Kuhle kakhulu ukulingana nabathuthukisi futhi ukwazi ukubhala ikhodi enhle. Kepha uma untula umcabango we-QA, uma ungakwazi ukuza nezimo ezanele zokuhlola izindaba zomsebenzisi nezici ngokujula, awungezi inani. Ungahle usebenze kanzima futhi ube ngunjiniyela.
Yazi futhi uqonde i-HTTP
Izinhlelo eziningi zewebhu zesimanje zisebenzisana nama-API.
Kubalulekile ukwazi nokuqonda ukwakhiwa kwe-HTTP nokuthi iwebhu isebenza kanjani. Uma ungeke uhlukanise phakathi kwesicelo se-POST nesicelo se-GET noma ungazi ukuthi uzokwenza kanjani hlaziya i-JSON , lapho-ke ungayivivinya kanjani ngempumelelo i-API?
Tshala isikhathi ekufundeni amathuluzi wokuhlola we-API njenge I-Karate .
Awukwazi ukuzibiza nge-SDET uma konke ofuna ukukwenza ukuzenzekelayo izivivinyo futhi konke okwaziyo yiJava, iSelenium neCucumber!
izinzuzo nezingozi zokuqhutshwa kokuhlolwa
Isimo Sokubhaliswa Komsebenzisi Nezimo Zokuhlola
Ukufakazela ubuqiniso kwe-OAuth 2.0 NgokuGatling Kusetshenziswa Ithokheni Lomthwali
Izichasiselo ze-JUnit 5 ezinezibonelo